तपाईंको MRP बन्यो कि बनेन भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? यसरी आफैं चेक गर्नुस.... बिस्तृतमा ~ नेसाज ब्लग
NESAJ Main site
Filled Under: Featured, Information, News
तपाईंको MRP बन्यो कि बनेन भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? यसरी आफैं चेक गर्नुस.... बिस्तृतमा
तपाईं नेपालमा हुनुहुन्छ या बिदेशमा? तपाईंले पासपोर्ट बनाउन फारम भर्नुभएको थियो? कति समय भयो भर्नुभएको? तपाईंलाई आफ्नो पासपोर्ट बन्यो कि बनेन या ता रिजेक्ट पो भयो की भन्ने पिर लागिरहेको छ? अब यो समस्या धेरै नलिनुहोस, आफैंले चेक गर्नुहोस। ईन्टरनेटबाटै अब तपाईले तपाईको पासपोर्ट बने नबनेको थाहा पाउनुहुन्छ यसका लागी तलको प्रक्रियाहरु अपनाउनुहोस।
१) तपाईले कहाँबाट फारम भर्नुभएको हो? त्यसै अनुरुप तल क्लिक गर्नुहोस।
यदि नेपालमै फारम भरेर बुझाउनुभएको हो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस।
बिदेशमा रहेका दुतावास या कन्सुलरबाट भर्नुभएको हो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस।
२) अब तपाईं यो तल देखाईएको जस्तै वेबसाईटमा पुग्नुहुन्छ।
३) राहदानी बनिसकेको र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाईसकेको बारे हेर्न Dispatched मा, बिबिध कारण बन्न नसकेको बारे हेर्न Rejected मा अनि राहदानि बिभागमा पुगेकोबारे हेर्न Received मा क्लिक गर्नुहोस।
४) यदि तपाईंको फारम भरेको सम्बन्धित कार्यालयको नाम देखिएन भने या पहिलेका लटको पनी जानकारी लिन मन लाग्यो भने सर्च गर्ने ठाउँमा गएर माथि चित्रमा japan टाइप गरेको जस्तै आफ्नो सम्बन्धित कार्यालयको ठेगाना टाईप गर्नुहोस।
नेपालमै बुझाएकाका लागी जिल्लाको नाम
बिदेशबाट बुझाएकाका लागी देशको नाम टाईप गर्नुहोस।
५) अब नाम सहितको लिस्ट हेर्न Lot No./Ref. No लेखेको कोलममा रहेको निलोमा लेखिएको Ref No.. मा क्लिक गर्नुहोस। यहाँ क्लिक गरेपछि नाम लिस्ट सहितको अर्को पेज खुल्नेछ। अब त्यहाँ चेक गर्नुहोस। Dispatched date को तल कहिले राहदानी बिभागबाट सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको भन्ने बारे पनि लेखिएको छ, सो पनि चेक गर्नुहोस।
नोटः राहदानि बिभागमा प्राप्त भएका भनिएका मा नाम लिस्ट उपलब्ध छैन। बनिसकेका या रिजेक्ट भएका मात्र नामहरुको लिस्ट उपलब्ध छ।
लेख संग्रह August (1) June (2) May (1) April (3) March (1) March (2) January (2) December (9) August (1) July (2)
जापानी विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति: जापानी भाषा विद्यार्थीले जान्नै पर्ने तथ्य
जापानी भाषाका विद्यार्थीहरुले, “जापानी विश्वविद्यालयहरुमा भर्ना हुनभन्दा अगाडि छात्रवृत्ति” सन्दर्भको बारेमा जानकारी नहुने कुरा एक सर्वेक...
भाषा पढ्न जापान आउने नेपाली विध्यार्थीका लागि उपयोगी सुझाव
बेद काफ्ले किन जापानी भाषा पढ्न जाने? धेरैको उत्तर हुने गर्छ - उज्ज्वल भविष्य बनाउन । तर उनीहरु मध्ये धेरैलाई कसरी उज्ज्वल भविष्य ...
तपाईं नेपालमा हुनुहुन्छ या बिदेशमा? तपाईंले पासपोर्ट बनाउन फारम भर्नुभएको थियो? कति समय भयो भर्नुभएको? तपाईंलाई आफ्नो पासपोर्ट बन्यो कि ब...
सपनाको देश जापानमा नेपाली बिध्यार्थीको बास्तविक कथा
:अभिनाश तामाङ ने पालमा हुँदा रहरै रहरका सपना थिएँ । उमेर धेरै नभएकाले पनि त्यस्ता उल्लासमय सपना आउनु स्वाभाविक थियो । त्यही लहलहैमा...
जापानमा नेपालीहरुले पाउन लक्ने बिभिन्न सरकारी तथा प्राइभेट छात्रवृत्तिहरु
यहाँ पढ्नको लागी निम्न छात्रबृत्तिहरु उपलब्ध छन। Government Scholarships list all ovr the Japan Scholarships by Private Foundation Ja...
केहि संस्थागत उपयोगी लिंकहरु
नेपाली दुताबास जापान
जापानी दुताबास नेपाल
नेप्लीज ईन्जिनियर्स एसोशियसन जापान
जापानका नेपाली अनलाईन समाचार
टोक्यो नेपाल डटकम
नेपाल जापान डटकम
नेपाल सन्देस डटकम
मितेरी जापान डटकम
पेज भिजिट संख्या
2014 © Nesaj blog